Processing - Nidaamka Baradhada
Dhismaha meel bakhaar ah oo lagu dhammaystiray Gobolka Krasnodar
Tuulada Leningradskaya, dhismaha warshad farsameysa qudaarta oo leh awood wax soo saar oo gaaraya ilaa 4 kun tan oo khudaar ah sanadkiiba waa la dhameeyay. Mashruuca waxaa lagu fuliyay marxalado. Gudaha ...
Qaab dhismeedka shirkadda Dutch-ka ah ee Lamb Weston Meijer, LVM SiAES B.V., ayaa weydiisatay Adeegga Antimonopoly-ka ee Federalka inay siiso ogolaansho horudhac ah si ay u hesho 39,38% ...
Sida laga soo xigtay Wasaaradda Maalgashiga, Warshadaha iyo Sayniska ee Gobolka Moosko, ee shirkadda PepsiCo ee magaalada. Kashira (LLC "Frito Lay Manufacturing") ...
Iskaashatada beeraha ee Tomsk "Siberian Athens" waxay qorsheyneysaa inay soo saarto khad casri ah oo lagu keydsho khudaarta oo qaadi karta 2021 tan maalintii 2; xoojinta ...
Shirkadda Volgogradtruboplast waxay soo saartay khad u gaar ah khudaarta lagu keydsho naxdinta leh. Mashruuc maalgashi oo wadar ahaan ku kacaya 545,2 milyan oo rubi, ayaa laga bilaabay ...
X5 waxay kordhin doontaa wax soo saarka cuntada diyaarsan
X5 Retail Group, oo ah tafaariiqleyda ugu weyn ee Ruushka, ayaa qorsheyneysa in ay warshaddeeda jikada u keento awood buuxda sanadka soo socda, kaas oo keena diyaar ...
McDonald wuxuu abaabulay safar indha indheyn saxaafadeed ah, intii lagu gudajiray hawsha oo dhan oo ah abuurista mid ka mid ah waxyaabaha ugu caansan shirkadda waxaa lagu soo bandhigay suxufiyiinta ...
Alaabta ceeriin ee wax soo saarka khamriga iyo waxyaabaha ku jira suxuunta khudradda ayaa lagu beero beerta cunto kariyeyaasha iyo milkiilayaasha maqaayadaha Sergey iyo Ivan Berezutsky ....
LLC "Agrobitholod", oo deggan aagga dhaqaale ee gaarka ah ee heer gobol "Terbuny", ayaa dhammaystiraya hawsha rakibidda qalabka ee shirkad loogu talagalay soo saarista khudaarta la qaboojiyey, ...
Shirkad Ingiriis ah oo lagu magacaabo Nudie Snacks ayaa bilawday iibinta jajabka iyo khudradda cagaaran. Waqtigan xaadirka ah waxaa jira laba dhadhan oo kala duwan: ...